Portescap waxay soo bandhigeysaa mootada cusub ee 16DCT si ay uhesho heerkeedu sarreeyo DCT ee matoorrada Athlonix. Mashiinka 16DCT wuxuu geyn karaa tiknoolajiyad isdaba-joog ah illaa 5.24 mNm oo dhererkeedu yahay 26mm oo keliya. 16DCT waxay adeegsaneysaa magnets Neodymium awood badan iyo naqshad tamarta hufan oo la hubo oo Portescap ah. Kafiican ...
Sidee bay u shaqeeyaan nadiifiyeyaasha?
Nadiifiyaha faakiyuumku waa mid ka mid ah qalabka nadiifinta guryaha ee maanta la isticmaalo. Nashqadeyntiisa fudud ee wax ku oolka ah ayaa meesha ka saartay iyadoo si nadiif ah boodhka iyo walxaha kale ee yaryar looga fogeeyo dusha gacmaha, waxayna nadaafadda guriga u beddeshay shaqo hufan oo si caddaalad ah u dhaqso badan. Isticmaalka waxba bu ...
Mitsubishi Motors wuxuu dib u xasuustaa gawaarida Outlander EX ee Shiinaha
Mitsubishi Motors waxay dib u soo celin doontaa 54,672 baabuur oo ku taal Shiinaha oo leh mashiinada muraayadaha ee dhibaatada leh. Dib-u-celinta, oo bilaabmaysa 27-ka Luulyo, waxaa loogu talagalay baabuurta dibedda laga soo dhoofiyo ee la soo saaray inta u dhexeysa Nofember 23, 2006 iyo Sebtember 27, 2012, sida laga soo xigtay Maamulka Guud ee Kormeerka Tayada, Kormeerka iyo ...
Soo bandhigida matoorrada yaryar ee adduunka ugu yar uguna awoodda badan
Matoorrada 'Piezoelectric ultrasonic' waxay leeyihiin laba faa'iido oo muhiim ah, oo kala ah cufnaanta tamarta sare iyo qaab-dhismeedkooda fudud, oo labaduba gacan ka geysta yaraynta. Waxaan dhignay matoor yar yar oo ah nooca ultrasonic iyadoo la adeegsanayo stator leh mug qiyaastii hal mitir cubic. Our hore ...
Warbixinta Global iyo China Micromotor Industry, 2016-2020
Wax soosaarka mikromotor-ka caalamiga ah wuxuu istaagay 17.5 bilyan oo unug sanadkii 2015, koror sanadle ah oo gaaraya 4.8%. Thanks to ololeyaal lagu casriyeynayo warshadaha iyo qalabka, wax soo saarka ayaa la filayaa inuu kor u kaco ilaa 18.4 bilyan oo unug sanadka 2016 una dhowaado 23 bilyan oo unug sanadka 2020. Shiinaha, oo ah soosaaraha ugu weyn adduunka ...